Madaxweynaha Mareykanka ayaa soo jeediyey in dadka lagu daaweeyo Kiimiko | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Madaxweynaha Mareykanka ayaa soo jeediyey in dadka lagu daaweeyo Kiimiko
Madaxweynaha Mareykanka ayaa soo jeediyey in dadka lagu daaweeyo Kiimiko
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Alex Brandon/AP Photo
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cambaareyn xooggan kala kulmay dhakhaatiirta caafimaadka caalamka kaddib marki uu soo jeediyey in daraasad lagu sameeyo dawada Jeermiska disha in lagu daweyn karo Coronavirus.
Sida oo kale Trump wuxuu ka dhawaajiyey in meydka dadka cudurka u dhinta lagu meyro ileyska loo yaqaanno UV ee jeermiska dila, fikirkaasi oo ay dhakhaatiirtu gaashaanka u daruureen.
Mar sii horreysayna wuxuu Trump sheegay Ileyska cadceedda iyo dawada jeermiska disha ay ku wanaagsan iney caabuqa dilaan.
Mr Trump waxaa digniin culus u soo jeediyey wakaaladda arrimaha caafimaadka ee u xilsaaran dalkiisa iyaga oo sheegay inuusan arrimaha dawooyinka faraha la soo gelin.
Muxu sheegay madaxweyne Trump?
Madaxweyne Trump iyo guddiga qaran ee ka hortagga Covid-19 u xilsaaran oo waxay aqalka cad kula hadleen kula hadleen warbaahinta iyaga oo faahfaahin ka bixiyey xaaladda Covid-19 iyo daraasaadka cudurkaasi la xiriira.
Wuxuuna madaxweynuhu sheegay daraasad ay dowladda Mareykanka sameeysay in lagu ogaaday Ileyska cadceedda iyo Kuleylka iney faayraska Covid-19 ay degdeg u daciifiyaan.
Daraasaddu waxay sida oo kale sheegtay dareeraha gacmaha lagu dhaqo inuu faayraska uu shan daqiiqo uu ku dilayo, waxaana dhammaantood ka degdeg badan ayeyna darasaddu sheegtay alkoolka dareeraha ah.
William Bryan, oo ah ku simaha madaxa wasaaradda arrimaha amniga gudaha ahna agaasimaha waaxda Saayniska iyo teknooloojiyadda ayaa macluumaadka daraasadda ku soo bandhigay shirka jaraa’id oo lagu qabtay aqalka cad ee Mareykanka.
Xilliga daraasadda hordhaceeda la soo bandhigayeyna waxaa lagu sheegay in loo baahan yahay tijaabooyinka in si taxaddar leh loo sameeyo, halka uu Mr Trump uu halkaasi ka soo jeediyey daraasado qoto dheer in weli loo baahan yahay.
“Sidaa darteed jirka waxaan ku gubi karnaa ileyska ama iftiin xooggan oo ka baxa awooddiisuna badan tahay” ayuu yiri. Halka Dr Beborah Birx oo ah iskuduwaha arrimaha Coronavirus ee aqalka cad uu sheegay, “Hadalka madaxweynaha inuu iska yiri balse aan la tijaabin, marka inuu isagu looga baahan yahay inuu tijaabiyo.”
“Sida aan horayba u sheegay, iftiinka leydhka ka baxaya ayaa qofka jirkiisa lagu qabanayaa ama hoostiisa lagu qabanayaa taasoo maqaarkiisa lagu qabanaya ama siyaaba kale loo adeegsanaya. Sida la sheegayna waxay ila tahay in tijaaba la sameeyo, rajaduse wey fiican tahay,” ayuu yiri madaxweynaha oo hadalka sii wata.
“Dawooyinka jeermiska dila sida ay daqiiqado faayraska ugu dilayaan ee daraasadda lagu sheegay, marka waa inaan arrimahaasi oo dhan aan darasaadkooda iyo tijaabadooda sii wadnaa”.
“Anigu dhakhtar ma ihi, balse sidaad ogtihiinba waxaan ahay qof caadi ah, sababtu ma garaneysaan?.”
“Isaga oo Dr Brix eegaya wuxuuna weydiiyey iney horay u maqashay kuleylka iyo iftiinka leydhka ka baxa in lagu daweyn karo?” Coronavirus.
“Maya dawa ahaan uma maqal,” ayey ugu jawaabtay Dr Brix, iyada oo hadalkeeda sii wadatana waxay tiri, markay xummad ku hayso inuu jirkaaga uu ka fal celiyo oo ay qandhada kaa degto waa sax oo waan maqlay, balse weli ma arag kuleylka iyo iftiinka in wax lagu daweeyo”.
“Marka arrintan waa muhiim waxaana habboon in dib u eegis lagu sameeyo” ayuu yiri Mr Trump.
Falcelin noocee ka dhalatay hadalka Trump?
Dhakhaatiirtu waxay ka digeen hadalka madaxweynaha ka soo yeeray iney ka dhalan karto khatar inteeda le’eg.
Dr Vin Gupta oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca neefsiga oo u warramay NBC News wuxuu sheegay “Talooyinkan ah in qofka lagu duro, in dareerayaasha nadaafadda loo isticmaalo iwm lagu sheego dawo cudurka looga hortago ay tahay qeyrumasuulnimo aad u khatar badan.”
“Waana waddada ay badanaa dadka isdilo ay isticmaalaan markay doonayaan iney isdilaan” ayuu yiri.
Kashif Maxamuud oo ah Dhakhtar ka howlgala Charleston, ee West Verginia wuxuu boggiisa Tweetarka uu ku soo qoray: “Aniga ka dhakhtar ahaan marnaba kuma talinayo in dawooyinka jeermiska dila qofka lagu duro shucaaca leydhka loo isticmaalo jirka bani aadamka si looga daweeyo Covid-19.”
“Fadlan talooyinka caafimaad Trump haka qaadanina.” ayuu yiri.
John Blames, oo ka howlgala isbitaalka guud ee Zuckerberg oo ku yaalla San Francisco, wuxuu isna ka digay dareeraha jeermiska looga hortago oo loo isticmaalo daweynta Covid-19 iney ka dhalaneyso dhibaato caafimaad.”
Maxay tahay tala bixinta ay soo jeedineyso dowladda Mareykanka?
Toddobaadkan aan ku jirno ayey ahayd marki ay xaruunta ka hortagga iyo xakameynta cudurrada ee Mareykanka ay shacabka dalkaasi u soo jeedisay iney aad uga taxaddaraan dareeraha nadaafadda ay ku ilaashadaan ee guriyaha lagu iibinayo ay mararka qaar faafidda cudurka qayb ka qaadan karto.
Hay’adda maamusha cunnooyinka iyo dawooyinka dalka Mareykanka waxay sida oo kale ka digtay, isticmaalka dareeraha jeermiska dila.